Speedgbọ oloko na - agba ọsọ dị elu dị mkpụmkpụ Distance | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraA ga-eji ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ dị mkpụmkpụ belata
A ga-eji ụgbọ oloko na-agba ọsọ dị mkpụmkpụ n'etiti
A ga-eji ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ dị mkpụmkpụ belata; Mmemme Kwa Afọ nke Onye isi oche nke 2020 gụnyere itinye ego na ụzọ ụgbọ elu, yana usoro ọmụmụ banyere High Train Train (YHT) emeela. Ministri Transportgbọ njem ga-ebido ahịrị Speeddị Ukwuu Ọsọ dị elu na 2020, ma bido ịmalite ọrụ ngosipụta n'okporo ụzọ YHT iji melite arụmọrụ.
Mmemme Kwa Afọ nke Onye isi oche nke 2020 gụnyere itinye ego na ụzọ ụgbọ elu, yana usoro ọmụmụ banyere High Train Train (YHT) emeela.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Sabah Barış Şimşek si kwuo, Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa, nke chọrọ ịbawanye arụmọrụ n'usoro YHT, ga-akwadebe usoro ọrụ ọhụrụ. N'ọnọdụ a, a ga-ahazi ụgbọ elu na-aga n'etiti isi obodo n'okporo ụzọ YHT.
A ga-abawanye ogologo ahịrị n’usoro YHT site na puku kilomita 2020 gaa na 213 puku 2 kilomita na 269. N'ebe a, eriri Ankara-Sivas YHT ga-abụ otu n'ime ahịrị enyere enyere aka na 2020. Ọ bụ ezie na nrụpụta ọrụ na ihe ndozi akụrụngwa na-aga n'ihu n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, a ga-etinye ego 2 puku 657 kilomita nke ọkụ elekere na 2 puku 654 kilomita nke akara ndị ahụ n’ahịrị ndị dị adị. A ga-emechakwa puku oghere 492 elebanye anya na 804 ihe nrịba ama ga - edenye. Ogologo ahịrị eletriki ga-abawanye site na 45 gaa na 49 kilomita na eriri akara ga - abawanye site na 50 kilomita ruo kilomita 56.
Ahịrị ọhụrụ nke aga-agwụcha na 2020
Na 2020, a ga - emechakwa usoro okporo ụzọ ọhụrụ. N'uzo a Halkalı- A ga-arụzu Rapway Rapway Kapıkule iji jeere ụlọ ọrụ n'ichepụta ihe na mbupụ ohere na mpaghara ga-abawanye. A ga-agwụcha usoro okporo ụzọ Konya-Gaziantep ma nwee ohere ịbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri Adana, Mersin na İskenderun.
Ndị njem ụgbọ njem ogologo njem n'efu.
Ọ bụrụ na enweghị ego ịgba aka na Izmirim Card, IZBAN…
Nsogbu Ogologo Anya UBER
A Ga-egbutu Oge Njem na Ankara Istanbul YHT Line
Mersin City Lush Maka Ụlọ ọrụ
Ihe ngbasa ohuru na ebe ogba abia nke Intercity…
Ogologo Ọdụ Electricgbọala eletriki
Yagbọ okporo ígwè Konya Gaziantep
Ingbọ oloko na-agba oke
Gosiputa oru n’uzo ndi NYT
YHT ogologo ogologo